Ranom-boankazo “majika” mitroka tavy miandrona, amin’ny alina
Maro ireo antony mahatonga ny vehivavy ho lasa be kibo. Ny fomba tena tsotra sy mahomby hisorohana izany nefa dia ny fihinana sakafo voalanjalanja hatrany, ankoatra ny fanaovana fanazaran-tena.
Na izany aza dia atoronay fikarakarana ranom-boankazo mora kararakaina ianao, ho fanampiana amin’izany fampihenana kibo haingana sy azo antoka izany. Sotroina alohan’ny hatory izy ity ary mandritra ny alina manontolo no handorany ireo tavy miandrona rehetra
Ireto avy ny zavatra ilaina
· Vovoka kanelina ½ sk
· « Vinaigre de cidre de pomme » 1 sk
· Sakamalaho voakiky ½ sk
· Persily 1 tasy
· Ranom-boasarimakirana 1
· Rano ½ l
Potserina miaraka ao anaty “mixeur” ireo fangaro rehetra ireo na haroina miaraka tsara fotsiny dia tantavanina rehefa avy eo. 15 minitra eo ho eo, mialohan’ny hatoriana no hisotroana azy mandritra ny 15 andro.
Inona ny vokatsoa entin’ireo akora tsirairay ireo?
· Manakana ny fitiavana te hihinan-kanina matetika ny kanelina sady mandoro tavy. Tsy maha be rivotra ihany koa izy ka manampy betsaka amin’ny fahamoran’ity fampihenana kibo ity.
· Ny “vinaigre de cidre” indray dia misoroka amin’ny aretim-bavony. Miady amin’ny fiforonan’ny “cholesterol” koa ny asidra ao anatiny.
· Mampihena ny fiforonan’ny rivotra any anaty kibo ihany koa ny sakamalaho no sady manampy amin’ny fanadiovana ireo loto rehetra miandrona ao anaty ao. Tsy mety ho an’ny vehivavy bevohoka sy diabetika kosa anefa izy ity.
· Ny tantely indray dia sakafo tena tsara indrindra hanoloana ny siramamy. Namana tsara ananana mandavan-taona satria hisorohana ny fitiavana te hitsakotsako amin’ny alina
· Ny persily indray dia mananankarena “fibres” ka manamora ny fandorana ny tavy miandrona ao anaty ao. Manamafy ny hery fiarovana ihany koa izy
· Ny voasarimakirana moa dia fantatra loatra amin’ny ireo singa mampihena ao aminy. Tsy mety amin’ireo manana olana amin’ny vavony, na voa izy.